ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်အတွက် သွားသင့်တဲ့ event လေးတွေကတော့… – For her myanmar
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်အတွက် သွားသင့်တဲ့ event လေးတွေကတော့…
Posted on February 27, 2019 Author Phyu Thant	Comment(0)
Event- Farmers Festival
မတ်လ ၂ရက်နေ့ တောင်သူလယ်သမားနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Yangon Farmers Market က ကျင်းပမဲ့ ပွဲလေးရှိပါတယ်။ အဲ့ပွဲလေးမှာ အချက်အပြုတ် ပြသခြင်းအစီအစဉ်၊ အသီးအရွက်များကို အချဉ်တည်နည်းများ ပြသခြင်း၊ ကလေးများအတွက် ပျော်ရွှင်စရာ၊ စက်ဘီးဖျော်ရည်စက်၊ ကံစမ်းမဲ၊ တေးဂီတ စတဲ့အစီစဉ်တွေကိုတောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနိုင်အောင်စီစဉ်ထားပေးပါတယ်နော်။အချိန်က မနက်၈နာရီကနေ နေ့လည်(၁၂)နာရီထိကျင်းပပေးမှာပါတဲ့။
အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်ပေးပါနော်။
Fun Band Live
ရက်စွဲ – ၂.၃.၂၀၁၉
Fun Band live လေးကို Mr.Tony Bar မှာ လာမယ့်စနေနေ့ ၈း၃၀ မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mr.Tony Bar မှာအနားယူရင်း သီချင်းလေးတွေနဲ့အပန်းဖြေလို့ ရတာပေါ့။ လိပ်စာလေးကတော့ အမှတ် ၁၇၂ ဗားကရာလမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာပါ။ အချိန်လေးကတော့ ၈း၃၀ ကနေစတင်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။
Related Article>>>>>ယောင်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်မြို့မှာ နေရမှာလဲ?
Event – Towards Myanmar Development
CSIS Towards Myanmar Development Talk Show ကို CSIS က ဦးစီးပြီး မတ်လ ၃ ရက်နေ့ UMFCCI ခန်းမ (အမှတ် ၂၉၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ) တွင်ကျင်းပသွားမှာပါ။ ဒီပွဲတွင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်နဲ့အတူ Security, Human Resources and Economy နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဝါရင့် ဆရာကြီးများမှဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာတဲ့ ယောင်းလေးတို့ရေ
နံနက် (၉) နာရီကနေ နေ့လည်(၁၂) နာရီအထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး နေ့လည်စာအဖြစ် စားသောက်ဖွယ်ရာများကိုလည်း တည်ခင်းဧည့်ခံသွားပါမယ်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားလို့ စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရပါမယ်တဲ့။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်ပေးပါနော်
Related Article>>>>ထိုင်းရိုးရာ ငါးလိမ္မော်ချဉ်စပ်ဟင်းရည်
ဘယ်သွားရမလဲမသိသေးတဲ့ယောင်းလေးတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာရလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပိတ်ရက်လေးဖြစ်ပါစေနော်။
မတျလ ၂ရကျနေ့ တောငျသူလယျသမားနကေို့ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ Yangon Farmers Market က ကငျြးပမဲ့ ပှဲလေးရှိပါတယျ။ အဲ့ပှဲလေးမှာ အခကျြအပွုတျ ပွသခွငျးအစီအစဉျ၊ အသီးအရှကျမြားကို အခဉျြတညျနညျးမြား ပွသခွငျး၊ ကလေးမြားအတှကျ ပြျောရှငျစရာ၊ စကျဘီးဖြျောရညျစကျ၊ ကံစမျးမဲ၊ တေးဂီတ စတဲ့အစီစဉျတှကေိုတောငျသူလယျသမားတှနေဲ့အတူပြျောရှငျစှာဆငျနှဲနိုငျအောငျစီစဉျထားပေးပါတယျနျော။အခြိနျက မနကျ၈နာရီကနေ နလေ့ညျ(၁၂)နာရီထိကငျြးပပေးမှာပါတဲ့။ အသေးစိတျသိခငျြရငျ ဒီမှာ ကွညျ့ပေးပါနျော။
ရကျစှဲ – ၂.၃.၂၀၁၉
Fun Band live လေးကို Mr.Tony Bar မှာ လာမယျ့စနနေေ့ ၈း၃၀ မှာကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ Mr.Tony Bar မှာအနားယူရငျး သီခငျြးလေးတှနေဲ့အပနျးဖွလေို့ ရတာပေါ့။ လိပျစာလေးကတော့ အမှတျ ၁၇၂ ဗားကရာလမျး၊စမျးခြောငျးမွို့နယျမှာပါ။ အခြိနျလေးကတော့ ၈း၃၀ ကနစေတငျဖြျောဖွမှောဖွဈပါတယျတဲ့နျော။
Related Article>>>>>ယောငျးတို့က မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဘယျမွို့မှာ နရေမှာလဲ?
Towards Myanmar Development
Towards Myanmar Development Talk Show ကို CSIS က ဦးစီးပွီး မတျလ ၃ ရကျနေ့ UMFCCI ခနျးမ (အမှတျ ၂၉၊ မငျးရဲကြျောစှာလမျး၊လမျးမတျောမွို့နယျ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေ) တှငျကငျြးပသှားမှာပါ။ ဒီပှဲတှငျ ပါမောက်ခ ဒေါကျတာနဇေငျလတျနဲ့အတူ Security, Human Resources and Economy နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးတှကေို ဝါရငျ့ ဆရာကွီးမြားမှဟောပွောဆှေးနှေးပေးသှားမှာတဲ့ ယောငျးလေးတို့ရနေံနကျ (၉) နာရီကနေ နလေ့ညျ(၁၂) နာရီအထိ ကငျြးပမှာ ဖွဈပွီး နလေ့ညျစာအဖွဈ စားသောကျဖှယျရာမြားကိုလညျး တညျခငျးဧညျ့ခံသှားပါမယျ။ လူဦးရေ ကနျ့သတျထားလို့ စိတျပါဝငျစားတယျဆိုရငျကွိုတငျစာရငျးသှငျးရပါမယျတဲ့။ အသေးစိတျသိခငျြရငျ ဒီမှာ ကွညျ့ပေးပါနျော
Related Article>>>>ထိုငျးရိုးရာ ငါးလိမ်မျောခဉျြစပျဟငျးရညျ
ဘယျသှားရမလဲမသိသေးတဲ့ယောငျးလေးတှအေတှကျ ရှေးခယျြစရာရလောကျပွီထငျပါတယျနျော။ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ပိတျရကျလေးဖွဈပါစနေျော။
Tagged day, Enjoy, Event, Farmer, Fun, holiday, Sunday
၂၀၁၉ ချစ်သူများနေ့ညမှာ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ Singles’ Night Event
Posted on February 18, 2019 Author Wathun
၂၀၁၉ အတွက် အမှတ်တရလေး တစ်ခုပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
Posted on May 9, 2019 Author Stella
ကလေးတွေဆို အခမဲ့စြဖ်ပြီး မေမေတွေကတော့ ၅၀%ပဲ ကျသင့်မှာပါနော်
စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ သွားစရာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပွဲအစီအစဉ် (၅) ခု
Posted on December 12, 2018 December 12, 2018 Author Sugar Cane
အိမ်မှာပဲ အိပ်မနေနဲ့တော့ ယောင်းရေ.. လန်းလန်းလေးဝတ်ပြီး ဖလန်းနိုင်မယ့် ပွဲလေးတွေလာပြီ
အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အလယ် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ